Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Monday, December 12, 2011 Monday, December 12, 2011 Labels: နှစ်သက်မိသော စာစုများ
ကျွန်ုပ် ဘယ်သူလဲဆိုတာ သင်တို့ သိကြပါရဲ့လား။ ကျွန်ုပ်ဟာ သင်တို့အတွက် အကောင်းဆုံး လက်ဆောင်ကိုပေးခဲ့ သူပါ။ သင်တို့ရဲ့ဘဝအတွက် မရှိမဖြစ်အရာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်မရှိဘဲ သင်တို့ဘဝဟာ မရှင်သန်နိုင်ပါဘူး။ ကမ္ဘာလောကကြီးပေါ်က လူသားတွေ အဆင်ပြေပြေ နေထိုင်နိုင်ဖို့ အတွက် ကျွန်ုပ်က ဘာတွေကို ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာ သတိထားမိပါရဲ့လား။
ကျွန်ုပ်ဟာ သင်တို့အတွက် သန့်စင်ကြည်လင်နေတဲ့ ရေချိုတွေ ပေးခဲ့တယ်။.
ကြည်လင်ယာယာစွာ စီးဆင်းနေတဲ့ စမ်းချောင်းတွေ၊ မြစ်တွေကို ပေးခဲ့တယ်။
သာယာလှပတဲ့ ရေတံခွန် စ်ိမ့်စိမ်းတွေ ပေးခဲ့တယ်
သစ်ပင်တွေ မျိုးစုံလှတဲ့ တောအုပ်တွေကို ပေးခဲ့တယ်.
ဖူးပွင့်ဝေဆာလှစွာ အရောင်အသွေးစုံပန်းကလေးတွေနဲ့ အလှပဆုံးရှုခင်းတွေ ပေးခဲ့တယ်။
မြေဆီမြေနှစ် ပြည့်ဝလှတဲ့ စိုက်ပျိုးမြေတွေ ပေးခဲ့တယ်။
ကျွန်ုပ် သင်တို့အတွက် အကောင်းဆုံး လက်ဆောင်တွေပေးခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ သင်တို့ဟာ ကျွန်ုပ် ပေးထားတဲ့ အရာတွေကို တန်ဖိုးမထားခဲ့ကြဘူး... တန်ဖိုးကို မသိမြင်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ကျွန်ုပ် ပေးတဲ့ သဘာဝအလှအပတွေကို ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ကြတယ်။
အမှိုက်တွေကို စည်းကမ်းမရှိ ပစ်ထားကြတယ်
သစ်ပင်တွေ လောင်စာအဖြစ် အသုံးချလို့ တောတွေ ကုန်ပြီ။
သင်တို့လူသားတွေအတွက် ကျွန်ုပ်ပေးထားတဲ့ သဘာဝအလှအပ အရင်းအမြစ်တွေကို သင့်တို့ကိုယ်တိုင် ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ကြပြီ။
ဒါတင်မက ကျွန်ုပ်ဟာ သင်တို့အတွက် သဘာဝ တောတိရိစ္ဆာန်တွေကိုလည်း လက်ဆောင် အဖြစ် ပေးခဲ့သေးတယ်။
ဒါပေမဲ့ သင်တို့ဟာ ကျွန်ုပ်ပေးတဲ့လက်ဆောင်တွေကို တန်ဖိုးမထားရက်စက် ကြမ်းတမ်းစွာ ဖျက်ဆီး ရက်ကြပါတယ်။
ကျွန်ုပေးတဲ့ လက်ဆောင်တွေအားလုံး သင်တို့လူသားတွေကိုယ်တိုင် လောဘစိတ်ကြောင့် ဖျက်ဆီးကုန်ကြပြီ။ ကျွန်ုပ်ဟာ သင်တို့ကို အသက်ရှိတဲ့အရာတွေကို ပေးထားခဲ့ပါလျှက်နဲ့ အသက်သေအောင် သင်တို့ကိုယ်တိုင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်။
ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ သတ္တဝါတွေရဲ့အသက် ဘယ်ဒင်းက ပိုအရေးကြီးသလဲဆိုတာ ခွဲခြား နားမလည်တဲ့အခါ ကမ္ဘာကြီးဟာ လွင်တီးခေါင်ခေါင်ဖြစ်လို့ တောင်တွေ ကတုံး ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။
ဒီလို အရိပ်မဲ့၊ အကာအကွယ်မဲ့၊ သားကောင်တိရိစ္ဆာန်တွေ ကင်းမဲ့နေတဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးကို သင့် မိသားစု နောင်လာနောက်သားတွေ အတွက် ချန်ရစ်ခဲ့လိုပါသလား။
ကျွန်ုပ်အတွက်၊ ကမ္ဘာမြေကြီးအတွက်၊ နောင်လာနောက်သားတွေအတွက် တစ်ခုခုတော့ လုပ်ပေးခဲ့ပါ။ သင်မှမလုပ်ရင် ဘယ်သူတွေ လုပ်မလဲ။ အခု မလုပ်ရင်ရော ဘယ်ချိန်မှ လုပ်မှာလဲ..
ကလေးတွေကိုလည်း သစ်ပင်ကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးတတ်အောင်၊ သစ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့ တန်ဖိုးကို နားလည်အောင်
သစ်ပင်စိုက်ပျိုးတတ်တဲ့ အကျင့်ကောင်းကို ငယ်စဉ်ကတည်းက ပြုစုပျိုးထောင်ပါ။
ဒါဆိုရင် ကျွန်ုပ်အတွက် သင့်အတွက်၊ နောင်လာနောက်သားတွေအတွက် စိမ်းစိုလှပ သာယာတဲ့ ကမ္ဘာမြေကြီးဟာ ဆက်လက် တည်ရှိနေမှာပါ။ ကျွန်ုပ်ဟာ သင်တို့ကမ္ဘာမြေကြီးအတွက် လက်ဆောင်များစွာ ပေးထားခဲ့တဲ့ သဘာဝတရား ဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာနက်ပေါ်က Love The Mother Nature ကို ဘာသာပြန်ပါသည်။
သဘာဝတရားက ပေးထားတဲ့ လက်ဆောင်များကို လူတိုင်း ချစ်ခင်မြတ်နိုး တန်ဖိုးထားတတ်ကြပါစေ...
31 Responses to “လက်ဆောင်”
December 12, 2011 at 4:08 PM
လူတစ်ချို့က အကြင်နာတရား အနည်းငယ်ခေါင်းပါးတယ်...လူတစ်ချို့က ကြင်နာတတ်တယ်...
December 12, 2011 at 4:22 PM
လောကမှာကြင်နာတတ်ချစ်တတ်တဲ့လူတွေများလာပါစေလို့ ဂျက်လဲ အကောင်လေးတွေကိုသနားတတ်ချစ်တတ်တယ်
ချစ်သူ (ယောက်ကျာင်္း)ကို သစ်ပင်လေးလို့ရီးစားဘ၀က
December 12, 2011 at 4:55 PM
ပုံတွေကို စိတ်ဝင်စားလို့ တစ်ပုံချင်း သေချာ ကြည့်မိတယ်။ တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့သားမွှေးတွေ၊ သားရေတွေကို စွဲလန်းနှစ်သက်သူ တို့ဆီမှာလည်း တွေ့ဘူးတယ်။ သက်ရှိသတ္တ၀ါတွေနဲ့ ကမ္ဘာမြေကြီးက အပြန်အလှန် မှီတင်းနေထိုင်ရင်း ရပ်တည်နေကြရတာပါ။ သဘာဝအတိုင်း တိရစ္ဆာန်လေးတွေ လွတ်လပ်စွာ သွားလာ၊ ရှင်သန်နေစေချင်လှပါတယ်။
December 12, 2011 at 5:34 PM
ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ အခုလိုပြောတာ ပိုပြီး ထိရောက်တယ်၊ ခြေနှစ်ချောင်းနဲ့ နားရွက်တို သတ္တဝါဟာ သတ္တလောကမှာ အတော့်ကို ခက်တဲ့ အမျိုးပါပဲ၊ ယိုယွင်းလာနေတဲ့ သဘာဝတရားအတွက် ဒီလိုပို့စ်မျိုးတွေ များများ လိုနေပါတယ်...။
December 12, 2011 at 5:43 PM
'ပေးကားပေး၏ မရ' ဆိုသလိုပေါ့ ချောရေ။
သဘာဝရှုခင်းနဲ့ သားကောင် တိရိစ္ဆာန်တွေ
ကင်းမဲ့နေတဲ့ ကမ္ဘာမြေကြီးကို မြင်ရမဲ့အစား
တန်ဘိုးကို လူသားတိုင်း နားလည်နိုင်ကြပါစေလို့
December 12, 2011 at 5:51 PM
December 12, 2011 at 7:44 PM
ဒို့က ဖျက်ဆီးတဲ့ထဲလည်း ပါဘူး၊ ကောင်ကောင်လေးတွေကိုလည်း ကြင်နာတတ်တယ်နော် :)
December 12, 2011 at 8:12 PM
December 12, 2011 at 9:00 PM
မချောရေ မကြည့်ချင်ဆုံးထဲမှာ သတ္တ၀ါတွေကို အတ္တတစ်ခုအတွက် သတ်နေတာ သွေးသံရဲရဲသေနေတာတွေ ပါပါတယ် .. စိတ်မချမ်းသာဘူး မချောရယ် ..း((
၀မ်းရေးအတွက်မို့ဆိုတာ လက်ခံပေမယ့် အကြောင်းမရှိညှင်းပန်းနှိပ်စက်တာကိုတော့ သိပ်မုန်းတာပဲ ..
December 12, 2011 at 9:30 PM
နှိုင်းယှဉ်အတွေးမျိုးကို အလေ့အကျင့်တစ်ခုလို ကြိုးစားတွေးနေတတ်ခဲ့လို့လားမသိဖူး... မချောရဲ့ Love the mother NATURE ကိုဖတ်ရတာ တစ်မျိုးလေး ခံစားရတယ်...။ အင်းးးးး ဒါကိုက ဒီ post ရဲ့ attraction တစ်မျိုးဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော်...။
December 12, 2011 at 9:33 PM
December 12, 2011 at 10:17 PM
အကြင်နာတရားတွေတဖြေးဖြေးခေါင်းပါးလာတဲ့ လူတွေအတွက် သိပ်ကောင်းတဲ့ ပို့စ်တစ်ခုပါပဲ...။
December 12, 2011 at 11:45 PM
ချောပြောတဲ့အတိုင်း လူသားတိုင်း နားလည်၊ လိုက်နာ၊ ကျင့်သုံး၊ ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာကြီးက ထာဝရငြိမ်းချမ်း၊ အေးချမ်းနေမှာ အမှန်ပါပဲ ချောရေ။
December 13, 2011 at 12:34 AM
တကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ပို့စ်နဲ့ ဓာတ်ပုံတွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချောရေ... အသိတရားများစွာ၇စေပါတယ်ဗျာ..
December 13, 2011 at 12:51 AM
December 13, 2011 at 3:02 AM
လက်ဆောင်ကို လာယူပါတယ်၊ ဓါတ်ပုံတွေ ရှာထားတာ ရှယ်ပဲ ...
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! said...
December 13, 2011 at 3:18 AM
San San Htun said...
December 13, 2011 at 5:32 AM
အမှန်ပါပဲ..သဘာဝကြီးရဲ့လက်ဆောင်ကို ယူပြီး တန်ဖိုးထားတတ်ဖို့သတိပေးတဲ့ ပို့ စ်ကောင်းလေးပါ
မေသိမ့်သိမ့် ကျော် said...
December 13, 2011 at 6:22 AM
ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အလှအပတရားတွေ ၊ သဘာဝတရားတွေကို ထိန်းသိမ်းဖို့ လူတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိကြောင်း ဒီပို့စ်လေးက ပြောလိုက်တာပါပဲ။ သိပ်ကို ကောင်းပါတယ် မချောရေ။
December 13, 2011 at 8:36 AM
December 13, 2011 at 8:55 AM
ကောင်းလိုက်တဲ့ ပိုစ့်ကလေးပါလား မချောရေ... ဟုတ်ပ သစ်ပင် များများစိုက်ရမယ်... မချောရေ..
Maung Myo said...
December 13, 2011 at 11:36 AM
Tun Tun said...
December 13, 2011 at 12:07 PM
Thank you for sharing. Everyone must aware of this.
December 13, 2011 at 12:37 PM
လက်ဆောင်ကောင်းတွေကို ကိုယ်တိုင် တန်ဖိုးထား ထိန်းသိမ်းသင့်သလို သူတပါး ထိန်းသိမ်း၊ တန်ဖိုးထားတတ်အောင်လည်း ကူညီလမ်းညွှန်ပြရမယ်။
December 13, 2011 at 7:06 PM
ကောင်းမွန်ပြီး အကျိုးရှိတဲ့ ပို့်စ်လေးပါ မချောရေ..
December 13, 2011 at 8:29 PM
တကယ် သတိပြူသင့်တဲ့ အရာတွေပါ အစ်မ...
လူတွေ လူတွေ တယ်လဲ ခက်ကြတာဘဲနော်...
December 15, 2011 at 7:06 AM
ဒီလက်ဆောင်တွေအားလုံးငါပိုင်တယ် အကုန်သုံးသွားမယ်ဆုိုတဲ့ လူမျိုးတွေကို ဒါလေးဖတ်မိစေချင်တယ်။
December 15, 2011 at 6:19 PM
လူတွေက အတ္တနဲ့ယှဉ်လာရင် မေတ္တာလဲ မထားတတ်ကြတော့ဘူး။ အကြင်နာတရားလဲ မရှိကြတော့ဘူး။ ကိုယ့်အတ္တကလွဲလို့ ဘယ်အရာကိုမှ တန်ဖိုးထားရကောင်းမှန်း မသိကြတော့ဘူး။ တန်ဖိုးတွေ ဆုတ်ယုတ်လာနေတဲ့ ကမ္ဘာလောကကြီးက ဘယ်လိုလုပ် နေပျော်ပါတော့မလဲနော်...
December 18, 2011 at 12:37 PM
Very Very Nice Post .
April 3, 2012 at 5:44 AM